Sawiro – Geelle Mag
Sawiro / Warar
Sawiro:-Wafdi gargaar Sidda oo Muqdisho soo gaaray
Ali Ahmed Posted On December 21, 2019
Wafdi ballaaran oo ka yimid Magaalada Hargeysa oo sida gurmad dhan $600,000 oo lagu gargaarayo dadka fatahaaduhu ay saameeyeen ayaa lagu soo dhaweeyay Muqdisho kadib markii Saakay ay kasoo ambabaxeen Magaalada Hargeysa. Deeqdan gargaarka ah ay waddaan Wafdigan ayaa waxaa […]
Madasha Xisbiyada Qaran oo sheegay inaanu dhaqan-gelin heshiiskii ay galeen Madaxweyne Farmaajo
Ali Ahmed Posted On December 19, 2019
War qoraal ah oo kasoo Madasha Xisbiyada Qaran ee uu hoggaamiyaha ka yahay Madaxweynihii hore ee dowladii kumeel gaarka aheyd ee Soomaaliya Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa ay ku sheegeen inuusan dhaqan-gelin wada-hadaladii iyo heshiisyadii ay dhawaan la […]
Sawiro:-Kulan looga arrinsanayey doorashada soo socota ee dalka oo lagu qabtay Muqdisho
Ali Ahmed Posted On December 17, 2019
Waxaa Maanta Magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka Soomaaliya kulan ku yeeshay Guddiga Madaxa-bannaan ee doorashooyinka dalka oo ay hoggaamineysay Guddoomiyaha Guddigan Marwo Xaliimo Ismaacaiil (Xaliimo Yareey) iyo xubno ka socda Wakiilada Beesha Caalamka ee Soomaaliya. Kulanka oo ay si wadajir […]
Sawiro:-Madaxweyne Waare oo kulan gaar ah la qaatay Saraakiil ka tirsan Ciidanka AMISOM
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hir-shabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare ayaa Maanta kulan kula yeeshay Aqalka Madaxtooyada Maamulka Hir-shabeelle ee Jowhar Saraakiisha Ciidamada dalka Burundi ee ka tirsan howlgalka AMISOM ee ka howlgala Gobolka Shabeellaha Dhexe. Kulankan ayaa labada dhinac waxa ay […]
Puntland oo soo bandhigtay habraaca diiwaan-gelinta Ururada Siyaasadda
Guddiga Kumeel gaar ah ee doorashooyinka Maamulka Puntland (TPEC), ayaa si rasmi ah waxa ay u soo bandhigeen Hannaanka iyo Habraaca loo marayo diiwaan-gelinta ururada siyaasadeed ee laga dhisayo deegaannada Maamulka Puntland. War qoraal ah oo kasoo baxay Guddiga ayaa […]
Sawiro:-Xildhibaano ka tirsan labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya oo gaaray Dhuusamareeb
Ali Ahmed Posted On December 16, 2019
Waxaa Maanta Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Maamulka Galmudug gaaray wafdi ka socda labada Gole ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya, iyada oo si weyn halkaasi loogu soo dhaweeyay. Xildhibaannada Maanta gaaray Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ka mid ah Senator Cabdi […]
Ciyaaro / Sawiro
Isku aadka wareegga 32-ka kooxood ee UEFA Europa League-ga oo la sameeyay
Waxaa goordhoweyd la sameeyey isku aadka wareegga 32-ka ee tartanka UEFA Europa League-ga, iyadoo ay kasoo baxeen kulamo aad u xiiso badan. Kooxda Manchester United ayaa booqan doonta naadiga Club Brugge lugta hore ee wareegga 32-ka ee tartanka UEFA Europa […]
Sawiro:-Kaamirooyin aan horay loo arag oo lagu xiray Waddooyinka qaar ee Muqdisho
Waxaa waddooyinka magaalada Muqdisho qaarkood inta badan lagu xiray kaamirooyin cusub oo lagala socon doono dhaq-dhaqaaqyada. Kaamirooyinkaan ayaa lagu arkay inta badan isgoyska wadada Makka Al-Mukarama ayaa ah kuwa loogu talagalay in lagu sugo Amniga Caasimadda. Kaamirooyinka oo ah nooca […]
Sawiro:-Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya oo hortagay Golaha Shacabka
Waxaa goordhoweyd Magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka Soomaaliya ka furmay kulanka caadiga ah ee Golaha Shacabka oo Maanta su’aalo lagu weydiinayo Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xildhibaan Xasan Cali Maxamed (Amar-dambe). Kulanka waxaa shir guddoominaayo guddoomiye ku […]
Sawiro:-Wafdi Matalaya Soomaaliya oo ka qeyb-galaya Shirka Madasha Aragti Wadaagga Soomaalida ee Jabuuti
Waxaa Maanta Magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti ka furmay Shirka Madasha Aragti Wadaagga Soomaalida oo uu soo qaban-qaabiyay Machadka Daraasaadka Siyaasadda ee Heritage ee uu fadhigiisu yahay Muqdisho. Shirkan oo ah shir sanadla ah ayaa waxaa ka qeyb galaya in […]